(Bash): Iwu ka igbanye onu ogugu | Site na Linux
Mgbe ụfọdụ, anyị na-eme mmemme ụfọdụ edemede kụọ …. na anyị kwesịrị (n'ihi ihe ụfọdụ) n'ịwa ụfọdụ random nọmba.
Maka nke ahụ, ịnwere ike ịhazi ngwa niile (ma ọ bụ ọrụ ...) ee, mana ... na-atụgharị anya na sistemụ anyị emeworị 😀
Na ọnụ, pịnye ihe ndị a ma pịa [Tinye]:
ikwughachi $ IDI
... nọmba ga-apụta, ha na-eme otu ihe ọzọ na nọmba ọzọ pụtara, were gabazie 🙂
Ihe ọ na - eme na - egosi gị ọnụ ọgụgụ na - enweghị atụ (ọ bụla) n'etiti 0 na 32768 (integer, ya bụ, na-enweghị a rikoma).
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ọ bụrụ ọnụọgụgụ, mana n’etiti 0 na ... ka anyị kwuo 100, inwere ike itinye ya ókè na ya 😀
ikwughachi $ (($ Naa% 100))
N'otu aka ahụ, ihe atụ ọzọ ... ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ bụrụ nọmba n'etiti 0 na 29 ọ ga-abụ:
ikwughachi $ (($ Naa% 29))
Aghọtaghị ya? 😀
Ọ bụrụ na ha ga-eji ya na bash akwukwọ ha na-eme, ka ekenye ihe emepụtara (nọmba na-enweghị usoro) na mgbanwe ọ ga-abụ:
Mgbanwe = `` ikwughachi $ (($ RANDOM)) ''
Ma nke a bụ ihe niile, amaghị m gbasara gị ... mana ama m na ọ ga-abara m uru oge ụfọdụ hahaha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » (Bash): Iwu ka igbanye onu ogugu
Anọ m na-anwale ya naanị na ọ laghachiri nọmba 4-ọnụọgụ, otu esi eme ka ọ buru ibu?
Ndụmọdụ dị ezigbo ụtọ, daalụ.
Laghachi a nọmba n'etiti 0 na 32768, enwebeghị m ike inwe nọmba ka ibu.
ọ nwere ike iwepụta ihe akara aka ????
Nke ahụ na-arụ ọrụ mana ọ bụghị nke kachasị mma, maka naanị ihe kpatara na RAANDOM bụ mgbanwe ma ị nwere ike ịme:
mgbanwe = $ Randand
na nke ahụ bụ ya! emela ngwa ngwa na njedebe aprte (nke a bụ ihe ị na-eme)
Eeh, o doro anya na enwere ike nweta ya dị ka nke a… naanị ihe dị iche bụ na mgbe e mesịrị, iji hụ ọnụọgụ nke mgbanwe ahụ were (ebe ọ bụ na onye ọrụ abụghị onye na-eche nkọ), ọ ga-adị mkpa ịme mgbughari… n'ikpeazụ, ihe m na-eme ebe a bụ naanị ikwughachi okwu (nke mere na onye ọrụ nwere ike ịhụ ọnụọgụ ole ewere) site na mmalite.
Ana m eme ka m ghọta ya? 🙂
Zọ ọzọ iji mepụta nọmba na-enweghị usoro, ọ bụ ezie na oge a ọ ga-abụ iwu a:
ụbọchị "+% N" | ebipụ -c 9
Nke ahụ ga-enye anyị ụbọchị na nanoseconds nwere ọnụọgụ 9. Ọ bụrụ na anyị chọrọ otu ọnụ ọgụgụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-etinye "cut -c 9" (ọnụọgụ ikpeazụ na-adịkarị ụkọ n'ihi na ọ bụ ntakịrị pere mpe nke nọmba) Ọ bụrụ na anyị chọrọ ọnụ ọgụgụ 2 mgbe ahụ anyị na-etinye "ịkpụ - c 8,9". Ọ bụrụ na anyị chọrọ ọnụ ọgụgụ atọ mgbe ahụ "bee -c 7-9" (anyị bido iji akara mgbochi).
Naanị ihe ọjọọ dị na nke a bụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ọtụtụ nọmba aghara aghara n’usoro n’oge dị mkpirikpi, n’ihi na nke a bụ nọmba aghara aghara site na ụbọchị na oge ya. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị ejiri iwu ahụ mee ihe, anyị nwere ike ịhụ na:
$ maka m na 'seq 1 1 500`; mee ụbọchị "+% N"; mere
Echere m na o doro anya na nri? Onu ogugu di n'aka ekpe yiri ka obere oge, n'ezie, na ndi aka nri di "random".
Zaghachi Wuilmer Bolivar
anya ojii dijo
mmm… Enwere m mmasị na ya, enwere m obere edemede nke fọdụrụ iji nye nọmba ọnụọgụ, daalụ.
Zaghachi na anya ojii
Ọ na-eje ozi .. na otutu ..
karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-mmemme ihe interface na bash na paswọọdụ, nche, wdg, wdg, wdg haha.
José Antonio Na-esoro Bent dijo
Nke mbu, n’ezie, ekele diri ebe nrụọrụ weebụ a di nma, nke m na-agbaso kemgbe.
Nke abuo, mee obere ihe na ntinye a:
Mgbe ị na-egbochi dị ka nke a:
ikwughachi $ (($ Naa% 10))
N'ezie, ihe ị nyere onye ntụgharị okwu iwu bụ na ọnụọgụ gị mepụtara bụ mgbe niile modulus% (nke fọdụrụnụ nkewa) nke nọmba na-esote, na ihe atụ a, 10.
Onu ogugu obula nke 10 kewara agaghi enye dika ihe fọduru nke kariri onye nkewa.
Nsogbu bụ na ọ gaghị enye nọmba ahụ kwa, n'ihi na nkewa site na 0 abụghị ihe ezi uche dị na ya maka onye ntụgharị okwu.
Nke a pụtara na ikwughachi $ (($ RANDOM% 10) ga-enye nsonaazụ n'etiti 0 na 9, mana ọ dịghị 10.
Ihe ngwọta maka esemokwu a bụ ịgbakwunye otu na njedebe gị, nke mere na ọnụ ọgụgụ ahụ dabara na usoro dịgasị iche.
ikwughachi $ (($ Naa% 11))
Nke a ga - enye nsonaazụ n'etiti 0 na 10.
Zaghachi José Antonio Soro Folded
<° Akwụkwọ ahụajaPack Nke mbụ SinceLinux zoo!
iptables, ihe approximation ka a n'ezie ikpe